CAYAARAHA DALKA | Bakool.net
Home / CAYAARAHA DALKA
Daa’uud Cabdullaahi Tubaal oo galabta iskoor gaar ah sameenayo iyo warbixin ku saabsan Super Cup-ka Soomaaliya galabta la cayaarayo:
Cayaaryahan Daa’uud Cabdullaahi Tubaal oo khadka dhexe kaga cayaaro naadiga Dekadda ayaa ah cayaaryahanka kaliya ee u suura gashay 5-sano ugu dambeesay Super Cup-ka Soomaaliya la cayaarayo afar sano sano ka mid ah inuu cayaaro. Daa’uud Cabdullaahi Tubaal sedexdii Super Cup ugu dambeesay uu cayaaray mid wuu ku guuleestay asigoo Jeenyo ka tirsan midna waa laga qaaday halka midka kalena ...
Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Guul u Rajeeyay Ciyaartoyda Xulka Qaranka Soomaaliya
Ra’iisulwasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa guul u rajeeyay xulka kubadda cagta dalkeenna ee Xiddigaha Badweynta oo la cayaari doona Dhiggooda Ethiopia. Qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter,ayuu ra’iisulwasaare Kheyre ku yiri ‘Waxaan guul u rajeynayaaxulkeenna kubbadda cagta kulanka ay la yeelanayaan dhiggooda Ethiopia” Ra’iisulwasaare Kheyre ayaa intaas ku daray in mas’uuliyiinta,shacabka iyo qarankuba ay taageero la garab taagan ...
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa boggaadiyey dar-darta ay ku socoto howlaha dib loogu hagaajinayo Garoonka Cayaaraha ee Staadiyo Muqdisho. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka qeyb galay barnaamij qeyb ka ah Ololaha Is-xilqaan oo 100 dumar ah shaqo loogu abuuray, si ay u dar-dargeliyaan nadaafadda iyo dib u habeynta Garoonka. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ...
Maamulka Gobolka Banaadir oo la wareegay garoonka Minishiibiyo ee degmada Warta Nabadda +SAWIRRO XUL AH
. Waxaa shalay garoonka Minishiibiyo ee degmada Warta nabadda ka dhacay xaflad uu maamulka Gobolka kula wareegay garoonkaas, waxaana kasoo qayb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna duqa magaalada Muqdisho, Xildhibaanda labada aqal, maamulka Isboortiga gobolka, Madaxda degmada Warta Nabadda, Madaxda xiriirka kubadda cagta, masuuliyiinta naadiyada kubadda cagta iyo maamulka kooxda Banaadir SC. Guddoomiyaha Naadiga Banaadir SC Abuukar Maxamed Shiikh oo ugu ...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay xulka degmada Waaberi hanashada Koobka Degmooyinka Gobolka Banaadir oo sannadkii 2-aad oo xiriir ah ay ku guuleysteen. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku ammaanay xulka degmada Shibis dadaalka ay muujiyeen iyo sida ay ugu soo dhabar adayggeen in ay soo gaaraan ciyaarta kama danbeysta ah. Madaxweyne Farmaajo oo shahaadooyin maamus ...
Waxaa Galabta la daah Furi Doona Tartanka koobka Jeneral Daa’uud oo ah tartan caan ah oo sanadkiiba mar uu qabto xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed, waxaana sanadkan ka qeyb galaya ilaa 16-kooxood oo kala duwan. Koobka Jeneral Daa’uud waxaa sanadkii ugu dambeyay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Elman kadib markii ay dherbaaxo u geesatay naadiga Jamhuuriya. Tartankan waxaana loo qabtaa in ...
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa kulan wadatashi ah oo looga hadlayay mudeynta tartanta Finalka ee Cayaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir kula yeeshay xarunta Dawladda Hoose bahda Cayaaraha heer Gobol iyo heer Qaran. Kulanka ayaa waxaa lagu go’aamiyey in habeenka Isniinta ah ee 24-ka bishan la qabto dhammaadka tartanka dhexmari doona degmooyinka Shibis iyo Waaberi ...
Markale ayaa lagu wadaa in xilli habeen ah la ciyaaro kulanka kama dambeysta ah ee tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir. Finalkiisa waxaa isugu soo haray Shibis iyo Waabari oo bandhig wanaagsan ku sameeyay tartanka. Maamulka Isboortiga Gobolka Banaadir ayaa qorsheenaya in markale ay Bahwaynta Isboortiga ay soo xasuusiyaan Xilliyadii Barisaadka iyo sanadkii la soo dhaafay maadaama tartanka xilli habeen ah la ...
Waaberi ayaa noqotay Degmadii ugu horreysay ee u soo baxda afar dhammaadka tartanka Degmooyinka Gobalka Benaadir kaddib markii ay gool madi ah galabta kaga adkaatay Boondheere. Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-0. Balse markii la isku soo laabtay qeybta labaad ee dheesha ayay Waaberi heshay goolka ay ku adkaatay. Waaberi waxay iminka sugeysaa cida ka soo baxda ...